Missing Pieces: သြစတေးလျ အတွေ့အကြုံများ (၁)
သြဇီမှာ နေနေတာဆိုတော့ သြဇီမှာ ဘယ်လိုနေလဲ၊ ဘာတွေရှိလဲ၊ ဘာတွေလုပ်လဲ ဆိုတာတွေကို သိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပါမယ်။
သြဇီမှာနေတဲ့အကြောင်းမပြောခင် နောက်ကြောင်းနည်းနည်းပြန်ရမှာပေါ့ . . .
ဒါမှ သြဇီကို ဘယ်လိုမျက်စိလည်လမ်းမှားပြီးရောက်လာသလဲဆိုတာသိမှာပေါ့ . . .
သြဇီကို ကျောင်းလာမတက်ခင် စင်ကာပူမှာ ၂ နှစ် ကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်တန်းပြီးပြီးချင်း စင်ကာပူ PSB Academy မှာ ပညာသင်ကြားဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ PSB မှာ နှစ်နှစ်ကျောင်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ တော်တော်လေးကို စင်ကာပူမှာနေရတာပျင်းလာပါတယ်။ အဲဒါအပြင် PSB မှာတက်ရတာကိုလည်း သိပ်ပြီး အားမရတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ သြဇီမှာကျောင်းတက်ဖို့ လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ လျှောက်တဲ့ကျောင်းတွေထဲကနေ University of Queensland ကို ကြိုက်လို့ လက်ခံလိုက်ပြီး ဗီဇာဝင်ကာ သြဇီကိုရောက်လာပါသတဲ့။
သြဇီကို လာဖို့ စင်ကာပူကနေ ၇နာရီတိတိ လေယာဉ်စီးရပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းတဲ့ခရီးပါ။ ဒီလိုနဲ့ သြဇီမြေကို ခြေချမိပါတယ်။
သြဇီ Brisbane Airport ကိုစရောက်တော့ စစတွေးမိတာက တော်တော်ကို ခြောက်ကပ်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့အတွေးပါ။ လေယာဉ်ကွင်းမှာ လူရှင်းနေတဲ့အပြင် စင်ကာပူလေဆိပ်နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် တော်တော်လေးသေးပါတယ်။ တစ်ခုခံစားမိတာက စင်ကာပူကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် စရောက်တုန်းက အလွန်ကို အံသြသွားခဲ့ပေမယ့် Brisbane ကိုရောက်တော့ အဲလို အံ့သြမှုမရှိတာအမှန်ပါပဲ။
Brisbane ကိုရောက်တော့ University of Queensland (UQ) ကလာကြိုပါတယ်။ အဲနောက်မှာ တည်းရမယ့်ဟော်တယ်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် သြဇီအဝင် နိဒါန်းလေးပါ။
စင်ကာပူမှာ နှစ်နှစ်နေခဲ့တော့ Brisbane မြို့အကြောင်းပြောတဲ့အခါ စင်ကာပူနဲ့ နှိုင်းနှိုင်းပြီးပြောပါမယ်။
ပထမဆုံးပြောပြချင်တာက သွားလာရေးပါ။ စင်ကာပူမှာ Public Transport အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Brisbane မှာ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စင်ကာပူမှာလို အမ်အာတီ စီးလို့မရပါ။ မြို့ပတ်ရထားတော့ရှိပါရဲ့။ မြို့ရဲ့နေရာတိုင်းကို ရထားမရောက်ပါဘူး။ တစ်ချို့တစ်ချို့သော အရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုသာရထားရောက်ပါတယ်။ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာသွားချင်ရင် အများအားဖြင့် bus စီးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကကျောင်းနားမှာနေပေမယ့်လည်း bus စီးပြီးကျောင်းတက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျောင်းကို သုံးမှတ်တိုင် စီးလိုက်ရင်ရောက်ပါတယ်။ စားစရာ ဟင်းချက်စရာတွေ ရောင်းတဲ့နေရာကိုတော့ တစ်မှတ်တိုင်စီးရပါတယ်။ bus မစီးပဲသွားရင် လျှာထွက်ပြီးသေနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းကို မိနစ်သုံးဆယ်လောက်လျှောက်ရပါတယ်။ နေပူကျဲကျဲမှာ ဘယ်လိုမှမလျှောက်နိုင်ပါ။ ဒီတော့ bus ပဲစီးရပါတယ်။ bus တွေက ဆယ့်ငါးမိနစ် မိနစ်သုံးဆယ် မှ တစ်စီးလာပါတယ်။ တစ်စီးလွတ်သွားခဲ့ရင် တော်တော်ကြာအောင်ကိုစောင့်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လူကျပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ကိုယ်က စောင့်နေတာကိုမြင်ရင်တောင်ရပ်မပေးပါဘူး။ လူပြည့်နေလို့ပါ။ အဲဒီလိုနေ့မျိုးဆိုကျောင်းနောက်ကျပါတယ်။ ဒီတော့ Public Transport မှာ စင်ကာပူကို Brisbane မမှီပါ။ ဒါ့အပြင် ကားခက တစ်ခါစီးရင် တစ်ဒေါ်လာနှုန်းလောက်ကျပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာလို တက်စီစီးချင်တိုင်းစီးလို့မရ ဈေးအရမ်းကြီးပါတယ်။
ဒီတော့ မင်း သြဇီက Transport ဘာကောင်းသတုန်းလို့မေးမှာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ . ကောင်းတာတော့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်နိုင်ခြင်းပါ။ တကယ်လို့ ကားမောင်းတတ်မယ်၊ ပိုက်ဆံရှိမယ်ဆိုရင် ကားတစ်စီးကို သြဇီဒေါ်လာ တစ်ထောင်ကနေစလို့ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ သုံးထောင် လေးထောင်လောက်တန်တဲ့ ကားဆိုရင် တော်တော်လေးကို ဝယ်ရ စီးရတာတန်ပါတယ်။ ဒါက သြဇီရဲ့ အားသာချက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ သိန်းငါးရာလောက်ဆိုရင် ကားအသစ် ကားကောင်းမရနိုင်ပေမယ့် ဒီမှာ နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်တွေကို အဲဒီဈေးနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ပြိုင်ကားတွေလည်း ဝယ်ချင်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဓာတ်ဆီပါ။ ဓာတ်ဆီဖိုးကတော့ မသက်သာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆီစားနည်းတဲ့ ကားကို ဝယ်ရင်တော့ တော်တော်တန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မလို့ သြဇီမှာလူတော်တော်များများ ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိမှလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါကတော့ Brisbane မြို့ရဲ့ Transportation အကြောင်းပါ။ လာချင်တဲ့သူတွေလည်း သိရတာပေါ့။ ကားလိုင်စင်လေးတော့လုပ်ထားကြဖို့လိုလေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
နောက်ပို့စ်တွေမှာ သြဇီအတွေ့အကြုံတွေကို ဆက်ပြောပြပါဦးမယ်။
Brought to you by နေတိုက်ရှိန်း at 12:51 AM
Labels: ကိုယ်တွေ့, သြစတေးလျ, ဗဟုသုတ
ကေသရာဇာ January 31, 2010 at 3:03 AM
အားပါး တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာဘဲ Transportation က။ Newcastle လို တောလေးဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး။ :|